Maamulka Gobolka Mudug kan degmada Galkacyo iyo Taliskii Qaybta Gobolka oo isbedel lagu sameeyey. – Radio Daljir
Maamulka Gobolka Mudug kan degmada Galkacyo iyo Taliskii Qaybta Gobolka oo isbedel lagu sameeyey.
Luulyo 4, 2016 4:20 b 0
(July 04 2016)-Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta mas’uuliyiin u magacaabay maamulka gobolka Mudug, laamaha ammaanka, kan degmada Galkacyo iyo xarumo kale.
DHEGEYSO-Sanadkadib doorashadii madaxweynaha Galmudug maxaa u qabsoomay.
DHEGEYSO-Bahda Waxbarashada Puntland oo cambaareeyey xariga dowladdu kula kacday Daljir.